Social Media Marketing - Discuss Agency
Training Video Shop
Facebook Marketing ဝန်ဆောင်မှု
Facebook Page ဆိုတာဟာ Customer တွေကို ကိုယ့်အကြောင်း ဘာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုး Service တွေပေးနေတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးနေတဲ့နေရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် Facebook ဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိထုတ်ကုန်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ ကြော်ငြာနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းသေးသေး ကြီးကြီး လူပေါင်းများစွာ ကိုယ့်လုပ်ငန်း အကြောင်းကို သိလာအောင် လုပ်လို့ရတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့ Page Management Service ကိုလိုအပ်တာလည်း ?
အဓိကအားဖြင့် Facebook ပေါ်မှာ Page ဖွင့်ပြီးတော့ ပိုစ့်တင်မယ်။ ပုံလေးတွေဓါတ်ပုံရိုက်တင်မယ်။ အရမ်းကိုလွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စနစ်တစ်ကျ Facebook Page ကို တည်ဆောက်တာ၊ Management လုပ်တာ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ကြော်ငြာတာလောက်ပဲ ရှိမှာပါ။ ကျန်တာ ဘာမှထိရောက်မယ် မထင်ပါဘူး။
အဓိက အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကြားနေရတာကတော့ “Facebook က ငါ့ငွေတွေကို စားသွားတယ်၊ အရင်လိုမျိုး မရောင်းရတော့ဘူး” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးပါပဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် Page Management ဝန်ဆောင်မှုကို Discuss Marketing Agency ကပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Page ကို ကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်စရာမလိုပဲနဲ့ Page မှာလိုအပ်သလို စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်တွေက Creative ဖြစ်တဲ့ Content တွေရေးပေးတာ၊ စာနဲ့ အဆင်ပြေစေမယ့် Gaphic Designဆွဲပေးတာ၊ Customer တွေစိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေဖို့အတွက် ဆောက်ရွက်ပေးတာ၊ Messenger ကနေ မေးလာသမျှကိုဖြေပေးတာ၊ Spam Comment တွေ၊ မလိုလားအပ်တဲ့ Comment တွေကိုဖျက်ပေးတာ၊ စတာတွေကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
အဲ့ဒါအပြင် ဘယ်သူတွေကို အဓိက Target ထားပြီး ငွေသုံး Boost လုပ်ရင် ဘယ်လောက်ထိ တက်မယ်ဆိုတာတွေက အစ ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် Facebook ကခွင့်မပြုတဲ့ ပုံစံတွေ၊ Facebook Guideline အတိုင်းမလုပ်တာတွေကြောင့်နောက်ဆုံး Like နဲ့ Follower တွေများလာမှ ပျက်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ Discussမှာအပ်ရင် အထက်ပါပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဖို့တာဝန်ယူတဲ့အပြင် Facebook ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ဥပဒေထဲကနေပဲ လုပ်ဆောင်သွားတာကြောင့် ကိုယ်တိုင် လူဌားပြီး အလုပ်လုပ်မလား ? ဒါမှမဟုတ် Discuss ကိုအပ်မလားဆိုတာပဲ စဉ်းစားလို့ရနေပါပြီ။
နောက်ထက်တစ်ခုက Facebook မှာ Page ဖွင့်ရင် ဘာများထူးခြားသွားမျာမလို့လည်းဆိုပြီးမေးစရာလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ထူးခြားချက်တွေကတော့ . . .
၂၄ နာရီ ၇ ရက်လုံး ကိုယ်ဝေမျှထားတာကို ကိုယ့် Customer ကအလွယ်တကူသိနိုင်တယ်၊ ကြည့်နိုင်တယ်
အသက်အရွယ်အလိုက်၊ အပြုအမူအလိုက်၊ စိတ်ဝင်စားမှုအလိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာ ကြော်ငြာလို့ရတယ်
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ Facebook ပေါ်မှာ ကြော်ငြာမယ်၊ ကိုယ့်ကြော်ငြာကိုလည်း လူသိတာများစေချင်တယ်ဆိုရင် အပြင်မှာလို Pamphlet ထုတ်၊ လူဌား စသဖြင့်ကြော်ငြာစရာမလိုပဲ အပေါ်က ပြောထားသလို အသက်အရွယ် စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ အပြုအမူ ပေါ်မူတည်ရွေးချယ်ပြီးကြော်ငြာလိုက်တာနဲ့ လူသိတာပိုများလာမှာပါ . . .
ဘယ်လိုအရာတွေ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေတာလည်း ?
Full Page Management အပ်ထားသူများအတွက် အစအဆုံး Page Setup မှစတင်ပြီး ( Page မရှိလျှင်ဖွင့်ပေးသည်မှစတင်ပြီး ) ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
လူစိတ်ဝင်စားမည့် စာများ၊ ဒီဇိုင်းများပြုလုပ်ပြီး မိမိတို့၏ Brand ကို လူသိများလာအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
Page Like တိုးပွားလာအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
Facebook ပေါ်မှမေးမြန်းမှုများကိုဖြေကြားပေးခြင်းနှင့် Spam Message များကိုဖျက်သိမ်းပေးခြင်း။
မလိုလားအပ်သော Message များကိုဖျက်သိမ်းပေးခြင်း။
ကြော်ငြာရမည့် အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားနှင့် အခြားသော စိတ်ဝင်စားမှုများကို Target များကို ထုတ်ပေးခြင်း။
Digital ပိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အရာများကို ဆွေးနွေးပေးခြင်း။
သိပ်ပြီး အချိန်ကုန်ခံ မစဉ်းစားနေပါနဲ့တော့။ Facebook Page Control Management ကို အခုပဲ အပ်လိုက်ပါတော့ . . .
CALL NOW FOR QUOTATION !
Mobile Phone ( 1 ) : +(95)9777 00 28 77
Mobile Phone (2) : +(95)969 29 24 844
©2018 Discuss Agency. All Right Reserved.